भोकाएको बच्चालाई फकाउन किन ढुंगा पकाइन् यी आमाले? [हेर्नुस भिडियो] « Dainik Online
भोकाएको बच्चालाई फकाउन किन ढुंगा पकाइन् यी आमाले? [हेर्नुस भिडियो]
प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ५ : ०६
एजेन्सी । मान्छेले ढुङ्गा पकाएको बारेमा हामीले कथामा सुन्दै आएका थियौँ तर केन्यामा भने वास्तविक जीवनमै यस्तो घटना भएको छ।
पेनिनाको लागि गरिबी र मुस्किल यति बढेको छ कि अहिले आफ्ना बच्चालाई खुवाउन केही पनि छैन। यसकारण उनले बच्चाहरुलाई भुलाउनको लागि ढुङ्गा पकाउन थालिन्। केही पाकेको देखेपछि बच्चाहरु पर्खाइमा सुत्ने पेनिना सोच्छिन्।
उनकी एक जना छिमेकीले बच्चाहरु रोएको आवाज सुनेपछि के भएछ भनेर त्यहाँ पुगेकी थिइन्। एक जना छिमेकीले भिडियो नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा बताएकी छिन्।
पेनिनाको कहानी सुनेर मानिसहरुले उनका लागि रकम जम्मा गरे र पूरै केन्याबाट फोन आउन थाल्यो। पेनिनाकी एक जना छिमेकीले उनको बैंकमा एकाउन्ट खोलिदिइन्, जसको माध्यमबाट पेनिनाले रकम प्राप्त गरिन्।
केन्याका मानिसहरु यति दयालु हुन्छन् भनेर नसोचेको पेनिना बताउँछिन्। उनी यो सबै ‘एक चमत्कार’ मान्छिन्। उनले भनिन्, ‘म ढुङ्गा पकाएर उनीहरुलाई भुलाउने प्रयास गर्दैछु भनेर बच्चाहरुलाई थाहा थियो। तर मसँग योबाहेक अरु विकल्प थिएन।’
केन्यामा तीन सय ९५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा १९ जनाको ज्यान गएको छ। चरम गरिबी र अभावबाट गुज्रिरहेकाहरुको हालत अहिले पेनिनाको जस्तै बन्दै गइरहेको छ।